Hadii Xukuumadu Joojin Waydo Sharci Jabinta,Dalkan waxa Hogaamin Doono Madaxwayne ku xigeenka….xiildhibaan dheeg |
Hadii Xukuumadu Joojin Waydo Sharci Jabinta,Dalkan waxa Hogaamin Doono Madaxwayne ku xigeenka….xiildhibaan dheeg
Hargaysa(GNN)Xildhibaan Maxamed Maxamuud Dheeg oo ka tirsan Xildhibaanada aqalka Golaha Guurtida somaliland ayaa dagaalkii dhex maray labada Guddoomiye ku sheegay mid Ceeb qaranka u soo hoyota iyo golaha wakiilada somaliland,waxaana uu Farta ku goday in Dhabkii Shalay Golaha ka dhacay in Ayb Xukuumadu Faro ku lahayd.
Dheega ayaa soo jeediyay in Shuruucda iyo xeerarka golaha wakiilada in loo hogaan samo ay waajib tahay,hadii kalena Talada dalkana uu isna maroorsan Doono Madaxwaynaha oo Jooga Ku xigeenkiisu,Dhaqan ay Jidaysayna ay Noqon Doonto Xukuumada Talada dalka haysa ee kulmiye,Xildhibaanka oo maanta Shirjaraa’id ku qabtay Magaalada Hargaysa ayaa Sidaasi ku sheegay waxaana uu yidhi.
“Runtii shalay waxa dhacay wax Ceeb ah oo Aad iyo aad qaranka ceeb ugu ah,golayaasha ceeb ugu ah gaaro ahaan golaha wakiilada ceeb ku ah,lakiin halka ay ka timid iyo xididka waraabinaya laga war hayay,golaha wakiilada waxa ay ka codeyeen oo ay ka fadhiisteen oo ay naaqisheen inta haamaha lagu wareejinaayo Go’aan ayay ka gaadheen,waxa aynu ognahay oo aan qarsoonayn Xildhibaano layidhi waa Muxaafidiin oo laga soo abaabulay Madaxtooyada in ay Rabshada wadaan.
Intaas waxa uu ku daray isaga oo hadalkiisa siiwata waxaana uu yidhi.”Xildhibaanada Golaha wakiilada waxa lakeenay Mooshin ka soo horjeeda taas oo uu Go’aan ka gaadhay Guddoomiyaha Golaha Wakiiladu taas oo uu waafajiyay sharciga,marka ay sidaas tahay guddoomiye baashe gole wakiilna umuu hadlaynin,shuruuc iyo xeer hoosaad ay leeyihiina kamuu hadlaynin,waxa uu u hadlayay meel aan dadka khayr badan u lahayn.
Xildhibaan dheeg ayaa sheegay in Hadii uu dalku sidan ku Sii Socdo Talada Ku xigeen kastaa uu ku qabsan Doono Guddoomiyihiisa taasina ay noqon Doonto Dhaqan uu jideeyay Guddoomiye baashe oo Cabdiraxmaan Ciro Ku qabsaday Hogaaminta.
“Madaxwayne ku xigeenka ayaa bari madaxwayne siilaanyo ku qabsan Doona Hogaaminta dalka,hadii uu guddoomiyihii oo sidaas u fadhiya Guddomiye baashe yidhi fadhiya aniga ayaa guddoomiye idiin ahe oo ay raali Xukuumadu kaga ahayd oo ay ku soo dirtay,bari madaxwayne ku xigeenka ayaa siilaanyo ku qabsan doono oo odhan doona aniga ayaa madaxwayne ahe fadhiya,dalka in kala danbaynta in loo ilaaliyo ayaa muhiim ah oo laga ilaaliyo fawdada ayaan ku talin lahaa.
Geesta kale waxa uu dheeg madaxtooyada ku masaalay mid ku dhiiranaysa sharci jabinta dalkan”qabyaaladii ayaa dhinac laga dareemayaa eexdii ayaa jirta oo go’aan gole ka gaadhay ayaa olole kale lagu samaynayaa,waxaan leeyahay hala dhawro nimaadka qaranka u dhisan iyo xeerarka dalkani u yaalo,hadii taas la xeerin waayo ninka dhiilku u buuxow waa uu kaa daadan doonaa.